Diblomaasiyiinta AulaGEO - Geofumadas
Dibloomada - Khabiirka Dhismaha ee BIM
Koorsadani waxaa loogu talagalay isticmaaleyaasha xiiseynaya qaybta qaabdhismeedka qaabdhismeedka, kuwaas oo doonaya inay bartaan qalabka iyo hababka si dhammaystiran. Sidoo kale kuwa doonaya inay dhammaystiraan aqoontooda, maxaa yeelay qayb ahaan waxay bartaan softiweer waxayna rabaan inay bartaan isku-duwidda qaab-dhismeedka meertooyinkeeda kala duwan ee naqshadeynta, falanqaynta iyo qaabeynta ...
Koorsadani waxaa loogu talagalay adeegsadayaasha xiiseynaya aagga naqshadeynta farsamada, oo doonaya inay bartaan qalabka iyo hababka si dhammaystiran. Sidoo kale kuwa doonaya inay dhammaystiraan aqoontooda, maxaa yeelay qayb ahaan waxay bartaan softiweer waxayna rabaan inay bartaan isku-duwidda naqshadeynta aasaasiga ah ee wareegyada kala duwan ee moodelinta, falanqaynta iyo jilitaanka ...
Dibloomada - Khabiirka Howlgalka BIM
Koorsadani waxaa loogu talagalay adeegsadayaasha xiiseynaya berrinka qorshaynta dhismaha, ee doonaya inay bartaan qalabka iyo hababka si dhammaystiran. Sidoo kale, kuwa doonaya inay dhammaystiraan aqoontooda, maxaa yeelay qayb ahaan waxay bartaan softiweer waxayna rabaan inay bartaan iskuxirka naqshadeynta miisaaniyadda noocyadooda kala duwan ...
Dibloomada - Khabiir ku ah shaqooyinka madaniga ah
Koorsadani waxaa loogu talagalay adeegsadayaasha xiiseynaya dukaanada howlaha madaniga ah, ee doonaya inay bartaan aaladaha iyo qaababka si dhameystiran. Sidoo kale, kuwa doonaya inay dhammaystiraan aqoontooda, maxaa yeelay qayb ahaan waxay bartaan softiweer waxayna rabaan inay bartaan isku-dubbaridka qaabeynta shaqooyinka madaniga ah ee meertooyinkooda kala duwan ee helitaanka, naqshadeynta ...
Diblooma - Khabiir hawleed Land
Koorsadani waxaa loogu talagalay dadka isticmaala xiisaha aagga dareenka fog, ee raba inay bartaan qalabka iyo hababka si dhammaystiran. Sidoo kale, kuwa doonaya inay dhammaystiraan aqoontooda, maxaa yeelay qayb ahaan waxay bartaan softiweer waxayna rabaan inay bartaan isku-dubbaridka macluumaadka dhuleed ee wareegyada kale ee helitaanka, falanqaynta iyo qashinka ...
Diblooma - Khabiir ku takhasusay cilmiga hawada
Koorsadani waxaa loogu talagalay adeegsadayaasha xiiseynaya qaybta Nidaamyada Macluumaadka Juqraafiyeed, ee doonaya inay bartaan qalabka iyo qaababka si dhammaystiran. Sidoo kale kuwa doonaya inay dhammaystiraan aqoontooda, maxaa yeelay qayb ahaan waxay bartaan softiweer waxayna rabaan inay bartaan isku-darka macluumaadka geospatial ee helitaankooda kala duwan, falanqaynta iyo ...
Koorsadani waxaa loogu talagalay adeegsadayaasha xiiseynaya aagga qaabeynta 3D, ee doonaya inay bartaan aaladaha iyo qaababka si dhameystiran. Sidoo kale, kuwa doonaya inay dhammaystiraan aqoontooda, maxaa yeelay qayb ahaan waxay bartaan softiweer waxayna rabaan inay bartaan isku-duwidda naqshadeynta saddex-geesoodka ah ee wareegyada kala duwan ee helitaanka, qaabeynta iyo abaabulka xogta ...
Diblooma - Khabiir BIM MEP
Koorsadani waxaa loogu talagalay adeegsadayaasha xiiseynaya aagga naqshadeynta korantada, oo doonaya inay bartaan qalabka iyo hababka si dhammaystiran. Sidoo kale kuwa doonaya inay dhammaystiraan aqoontooda, maxaa yeelay qayb ahaan waxay bartaan softiweer waxayna rabaan inay bartaan isku-duwidda qaab-dhismeedka meertooyinkeeda kala duwan ee naqshadeynta, falanqaynta iyo qaabeynta ...